गफ ! .....: कथा : आँपको रुख
Posted by दीपक जडित at 3:21 PM
दिपक दाइ घटनाक्रम जे जस्तो भए पनि प्रस्तुती निकै चोटिलो लाग्यो ! यहाँ उल्लेखित अन्तिम चिठ्ठीले गर्दा नै अलिक पाठकको मन कुत्कुत्याउन सफल भएको छ ! धन्यबाद यो लेखनको लागी दिपक दाइ !
पुन: यस्तै मिठा मिठा कथाहरु प्रस्तुत गर्दै जानुस है !
यो कथा पढे पछी रोए म ---
पहिला त काल्पनिक कथा जस्तो लाग्यो
चिठी को सम्बोधन पढ्दा साच्चिकै हो जस्तो लाग्यो
अहिले फेरी दुबिधा भयो
यो त वास्तविक कथा हुनु पर्छ